NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ပှဲအခမျးလွှမီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 စာရင်းမှ Named Magewell
Home » သတင်း » အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ပှဲအခမျးလွှမီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 စာရင်းမှ Named Magewell
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ပှဲအခမျးလွှမီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 စာရင်းမှ Named Magewell
ဧပြီလ 23, 2019 - နန်ကျင်း, တရုတ်: Magewell အဆိုပါဖွင့်ပွဲတဦးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရဖို့ဂုဏ်ယူနေပါတယ် Streaming မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 ဟာ့ဒ်ဝဲ, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဖြစ်ကြောင်းမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဟာ၏စာရင်း "ကိုယနေ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေရွေ့လျားခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်။ "
အဆိုပါကုမ္ပဏီကနယူးယောက်စီးတီးရှိရာအရပျ, မေလ 205 နှင့်7ယူမယ့်လွှမီဒီယာအရှေ့ညီလာခံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲမှာပြခန်း 8 ၌ဤဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများဝင်ငွေကကူညီပေးခဲ့ကွောငျးတိုးချဲ့ထုတ်ကုန်အစုစုကိုပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Streaming မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 အသက်ရှင်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့် streaming များလုပ်ငန်းစဉ်၏တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဆင့်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသို့မဟုတ်စွမ်းရည်ပြသ, ဒါပေမယ့်လည်းခြုံငုံလုပ်ငန်းအသွားအလာအောင်မြင်သောစေသည် multi-ရောင်းချသူကိရိယာအစုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကောင်းစွာကိုက်ညီမသာကြောင်းဂီယာဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသူကိုပျေါလှငျကုမ္ပဏီများသည်။ တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူ panel က Streaming မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ ပံ့ပိုးအယ်ဒီတာများအဘယ်သူသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဖက်ထက်ပိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုကားမောင်းယနေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများအကြားအောင်မြင်သော Workflows ပုံဖော်နေကြသည်။ အဆိုပါ 25 ကုမ္ပဏီများမှဖော်ထုတ်
Magewell သမိုင်းကြောင်းအကောင်းဆုံးခြွင်းချက်အရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်၎င်း၏ capture devices များကိုများ၏စျေးနှုန်း / စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတန်ဖိုးလူသိများခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မကြာသေးခင်ကပြောင်းလဲခြင်း, streaming များနှင့်ပလေးအောက်အပါအဝင်အခြားအရေးပါတဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်ကိုဆောင် ခဲ့. ၎င်း၏ထုတ်ကုန်လိုင်းများတိုးချဲ့ထားပါတယ် - ပျောက်မအချက်ကို အဆိုပါတရားစီရငျ panel ကိုအပေါ်။
"Magewell ရဲ့ Pro ကို Capture အ နှင့် USB မှတ် Capture အ Plus အား လိုင်းများ go-to-devices များနေကြသည်ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအဘို့မိမိတို့ကင်မရာများနှင့်စီးဆင်းဖို့အဆင်သင့်နှင့်စံချိန်ထဲကဗီဒီယိုကိုရဖို့, "စတိဗ် Nathan-ကယ်လီ၏အယ်ဒီတာကပြောပါတယ် Streaming မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ။ ယင်းနှင့်အတူစီး encoding ကသို့ "Magewell ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် forays ultra Stream HDMI နှင့် IP ဗီဒီယိုနှင့်အတူ Pro ကို converter NDI® လာအချို့သောအချိန်များအတွက်အမှုအရာများ၏ထူအတွက် Magewell စောင့်ရှောက်ရန်အန်ကုဒ်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော။ "
ဘယ်လို Magewell ရဲ့ဆင်တူ Pro ကို Capture အ PCIe ကတ်များနှင့် USB မှတ် Capture အ ပြင်ပပစ္စည်းတွေဟာအလွယ်တကူလူကြိုက်များဆော့ဖျဝဲသို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံသတင်းရင်းမြစ်ကိုရောက်စေဖို့အသုံးပြုသူများကို enable Pro ကို converter မိသားစုသို့ထိုကဲ့သို့သောအချက်ပြမှုများကိုယူလာဘို့အများနှင့် အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်, IP ကို-based Workflows ထဲက plug-in များနှင့်-ကစားဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်း NewTek'' s ကို NDI နည်းပညာ။ ultra Stream ကို standalone ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများအပေါ်-ယူနစ်ခလုတ်သို့မဟုတ်တစ်ကြော့စမတ်ဖုန်း app ကိုမှတဆင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုပေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များစေခြင်းနှင့်ပင် Non-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများအတွက်ရိုးရှင်းသောမှတ်တမ်းတင်။ ထို့အပြင်ယင်း Eco Capture အ M.2 ကဒ်များမိသားစုအနေဖြင့်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနဲ့ Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်ထဲမှာ high-performance ကိုဖမ်းယူကယ်တင်တတ်၏ Flex ကို I / O ထုတ်ကုန်လိုင်းအရည်အသွေးမြင့်ပလေးအောက်ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူ Magewell ရဲ့အစွမ်းထက်ဖမ်းယူအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါင်းစပ်။
"ကျနော်တို့ကအစဉ်အမြဲကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, ရိုးရှင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေး, ဒါမှမဟုတ်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာချောမွေ့ကြောင်းချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်စေ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများ '' ဘဝတွေကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေနေပါတယ်" ဟုနစ်ခ်မာရင်းကျိုသည် Magewell မှာ CEO နဲ့ CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေး Streaming မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 ဤရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေး၌အကြှနျုပျတို့၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအောင်မြင်မှုထင်ဟပ်, ငါတို့သည်အနာဂတ်အတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, အွန်လိုင်းထုတ်လုပ်မှုဈေးကွက်ကိုပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆောင်ခဲ့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
မူပိုင် 2019 နန်ကျင်း Magewell အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd. , All rights reserved ။ NDI ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် NewTekအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင် Inc က။ #NDIcentral
Insys ဗီဒီယို Technologies က IBC2019 မှာနယူးတိမ်တိုက်မီဒီယာကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြေရှင်းချက်နဲ့ Expanded OTT ပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်ဖို့ - သြဂုတ်လ 22, 2019
Magewell ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး Workflows ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်အပွားမြန်တဲ့ချဲ့ထွင် Portfolio နှင့်အတူ IBC2019 မှခေါင်းစီး - သြဂုတ်လ 8, 2019
Magewell က Ultra Stream ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာမိသားစုအတွက်အစွမ်းထက်နယူးအင်္ဂါရပ်များ Unwraps နှင့် New မော်ဒယ် - ဇူလိုင်လ 18, 2019
4K ချီးမြှင့် အသံလွှင်း ဖမ်းဆီး ပြောင်းလဲမှု converter အန်ကုဒ် encoding ဟာ့ဒ်ဝဲ HDMI ip + LIVE M.2 Magewell NAB NDI Network ကို NewTek oem ပလေးအောက် ထုတ်လုပ်မှု ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ် အသံဖမ်း အသံသွင်းချက် SDI SDK ကို လွှ UHD က Ultra HD ultraHD ယူအက်​​စ်ဘီ ဗီဒီယိုကို Capture အ	2019-04-23
ယခင်: Mediaproxy BroadcastAsia ပြရန် 2019 မှာအကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်သည့်နှင့်အပြည့်အဝ OTT ပေးပို့စောင့်ကြည့်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ
နောက်တစ်ခု: ATEME High Quality ဗီဒီယို Encoding နှင့်အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်ကယ်ယူမှ Hitachi Kokusai Linear ဖွင့်မည်